Home Wararka Ciyaaraha Wararka Suuqa kala iibsiga: PSG oo dalab u direysa Paul Pogba, Chelsea...
Rui Patricio ayaa ogolaaday inuu ku biiro kooxda Roma sida ay ku warameyso qeybta Italy ee Sky Sport
Granada ayaa u dhaqaaqi karta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Carles Alena, sida laga soo xigtay Sport .
Kooxda Serie A ka ciyaarta ayaa dooneysa inay amaah ku hesho ciyaaryahanka khadka dhexe ee Dutch-ka ah ee Man Utd Donny van de Beek Calciomercato
Real Madrid ayaa carabka ku adkeysay Pau Torres inuu yahay dookh ay kula soo saxiixan karto mustaqbalka.
AS ayaa ku warameysa in kooxda reer Spain ay ku qancisay 24 jirkaan daafaca dhexe. AS
AC Milan ayaa dooneysa inay iska iibiso Rafael Leao xagaagaan. Weeraryahanka ayaan wacdaro ka dhigin San Siro waxayna diyaar u yihiin inay bartilmaameedsadaan ciyaartoy kale si ay ugu xoojiyaan safkooda hore. Calciomercato
Jurgen Klinsmann ayaa u furan inuu la wareego shaqada tababarenimo ee kooxda Tottenham Hotspur, sida ay qortay BBC Sport .
Miralem Pjanic ayaa ku laaban kara Juventus amaah laba sano ah oo ay qayb ka bixisay kooxda Barcelona, ​​sida laga soo xigtay Corriere dello Sport .
Barcelona ayaa u gudbi doonta saxiixa ciyaaryahanka Real Sociedad Mikel Merino madaama aysan dooneynin inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaska kooxda, sida ay qortay jariirada Marca .
Chelsea ayaa wali wadahadalo kula jirta kooxda Inter oo ku aadan saxiixa Achraf Hakimi inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, waxaana ay u soo bandhigeysaa inay isku bedesho ciyaartoy si loo dhimo qiimaha. Goal
Liverpool ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Divock Origi iyo Xherdan Shaqiri si ay u keenaan xidigo cusub oo weerar ah, Fabrizio Romano ayaa u sheegay barnaamijka Here We Go Podcast’ .
Manuel Locatelli ayaa la sheegayaa inuu xiiso ka helayo Yurub oo dhan, iyadoo Arsenal ay ka mid tahay kooxo badan oo doonaya, laakiin ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo ayaa ka caga jiidaya inuu ku biiro Goal
Paris Saint-Germain ayaa markale isku dayaysa inay Paul Pogba kala soo saxiixato Manchester United, sida laga soo xigtay Le Parisien.
Kooxaha Juventus iyo Tottenham ayaa si aad ah u doonaya saxiixa laacibka khadka dhexe ee kooxda Leeds Kalvin Phillips, sida laga soo xigtay TuttoJuve .
Chelsea ayaa diyaar u ah inay bixiso 52 milyan oo ginni oo lagu daray Marcos Alonso si ay Achraf Hakimi ugala soo wareegaan Inter Milan, sida ay qortay Mail Online.
Previous articleKooxda ku dhow heshiiska Ben White oo La ogaaday.
Next articleWax ka ogoow shan halyeey oo Real Madrid aysan ixtiraamin kahor Ramos.